TikTok e-commerce GMV သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ဒေါ်လာ ၉ ၅၁ သန်း အထိရောက်ရှိ ခဲ့သည် - Pandaily
TikTok e-commerce GMV သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ဒေါ်လာ ၉ ၅၁ သန်း အထိရောက်ရှိ ခဲ့သည်
Feb 28, 2022, 13:46ညနေ 2022/02/28 14:01:40 Pandaily
တရုတ် နည်းပညာ မီဒီယာ သတင်းရပ်ကွက် များအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Bounyin E-commerce ၏စုစုပေါင်း ကုန်ပစ္စည်း တန်ဖိုး (GMV) သည်ယွမ် ၆ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉ ၅၁ သန်း) ခန့်ရှိပြီး ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း နှင့်အထက် မှာ အင်ဒိုနီးရှား မှ ဖြစ်ပြီး ကျန် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း သို့မဟုတ်ထို ထက်နည်းသော ယူကေ မှ ဖြစ်သည်36kr.
ထို့အပြင် TikTok ၏ e-commerce ဌာနသည် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် GMV အတွက် ယွမ် ၁၂ ဘီလီယံ နီးပါး ရည်မှန်း ထားပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် နှစ်ဆ တိုးခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက် တွင် TikTok ၏ တရုတ်ပြည်မကြီး ဖြစ်သော Shanyin ၏ e-commerce လုပ်ငန်း သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် GMV တွင် ယွမ် ဘီလီယံ ၅၀၀ ခန့် ရရှိခဲ့သည်။
Buzzyin E-Commerce သည်တစ် နှစ်ခန့် လည်ပတ် နေသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က GMV သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် Buzzyin E-Commerce ၏ ၁% သာ ရှိခဲ့ပြီး အများစုကို အင်ဒိုနီးရှား စျေးကွက် မှ ပံ့ပိုး ခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် April ပြီ လတွင် Chuntone သည် အင်ဒိုနီးရှား နှင့် ယူကေ တို့နှင့်အတူ တိုက်ရိုက် e-commerce စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကို ကန ဦး ပစ်မှတ် စျေးကွက် အဖြစ် ရှေ့ပြေး စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ေႏွာင္း ပိုင္းက ျပန္လည္ သုံးသပ္ တဲ့ အစည္းအေဝးမွာ အင္ဒိုနီးရွား က GMV ဟာ TikTok E-commerce လုပ္ငန္း အားလံုးရဲ႕ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ ရွိတယ္လို႔ တာဝန္ရွိသူ တဦးက ေျပာေၾကာင္း TikTok E-commerce ဌာန နဲ႔ နီးစပ္ သူ တဦးက ေျပာပါတယ္။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ယူကေ တစ်ခုလုံး၏ နေ့စဉ် GMV စျေးကွက် ၏အရွယ်အစား သည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ အလတ်စား တိုက်ရိုက် အွန်လိုင်း စတိုး ၏အရွယ်အစား နှင့်ညီမျှသည်။
စမ်းသပ်မှု ပထမ နှစ်တွင် အင်ဒိုနီးရှား စျေးကွက် ၏ထူးခြားသော အောင်မြင်မှု သည် ဒေသတွင်း အီလက်ထရွန်နစ် စျေးကွက် ၏အရွယ်အစား နှင့် ရင့်ကျက် မှုတို့ ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သုတေသန ကုမ္ပဏီ Mentum Works ၏အဆိုအရ အင်ဒိုနီးရှား ၏ e-commerce ရောင်းချ မှုသည် ၂၀၂၀ တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၂. ၂ ဘီလီယံ သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး တရုတ်၊ တောင်ကိုရီးယား နှင့် ယူကေ ပြီးလျှင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် စတုတ္ထ နေရာတွင် ရှိပြီး အရှေ့တောင်အာရှ တွင် အကြီးဆုံး e-commerce ဈေးကွက် ဖြစ်သည်။ SenseTower ၏အဆိုအရ TikTok သည် အင်ဒိုနီးရှား ရှိ သုံးစွဲသူ သန်း ၂၀၀ ခန့်ကို download လုပ်ပြီး အရှေ့တောင်အာရှ တစ်ခုလုံး၏ ၄၀% ကျော်ရှိသည်။
အေရွ႕ေတာင္အာရွ သည္ တ႐ုတ္ အီလက္ထ ေရာ နစ္ ကုန္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား ၀င္ေရာက္ လာသည့္ ပထမဆံုး ပင္လယ္ ရပ္ ျခား ေစ်းကြက္ လည္း ျဖစ္သည္။ Alibaba သည်၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင် အရှေ့တောင်အာရှ e-commerce ဈေးကွက်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Lazada ကိုဝယ်ယူ ခြင်းဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။ Tencent ကျောထောက်နောက်ခံ ပြု ထားသော Shopee သည် Lazada ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ဒေသ ၏အကြီးဆုံး e-commerce ပလက်ဖောင်း အဖြစ် ကျော်တက် ပြီးနောက် ။ ပလက်ဖောင်း နှစ်ခုသည် အစ ပိုင်းတွင် အင်ဒိုနီးရှား သုံးစွဲသူများ ၏အွန်လိုင်း စျေးဝယ် ခြင်း အလေ့အထ များကို တရုတ်နိုင်ငံတွင် e-commerce လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ မှ သင်ယူ ခြင်းဖြင့် ပြုစုပျိုးထောင် ခဲ့သည်။
အင်ဒိုနီးရှား နှင့်မတူ သည်မှာ တရုတ် အီလက်ထရွန်နစ် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ပလက်ဖောင်း သည် ဗြိတိန် ဈေးကွက် သို့ ၀ င်ရောက် ခြင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ e-commerce ပလက်ဖောင်း များသည် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး နှင့် ထောက်ပံ့ရေး ကွင်းဆက် များတွင် မွေးရာပါ အားသာချက်များ မရှိပါ။ ထို့အပြင် ဤ ကုမ္ပဏီများသည် ဒေသခံ သုံးစွဲသူ များအကြား တိုက်ရိုက် စျေးဝယ် ခြင်း အလေ့အထ ကိုမြှင့်တင်ရန် အချိန် လိုအပ်သည်။ တုန်လှုပ် စေသော ၀ န်ဆောင်မှုပေး သူတစ် ဦး က ယူကေ မှ အဖွဲ့၏ တိုက်ရိုက် e-commerce GMV သည် 3C အမျိုးအစား အတွက် TikTok ၏တရားဝင် ထောက်ပံ့ငွေ အပေါ် အဓိက မှီခို နေ သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့် iPhone ကို ပလက်ဖောင်း ပေါ်တွင် ၂၀% အထိ ထောက်ပံ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Bytedance ရဲ့ TikTok ဆိုင် ဟာ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ် ၊ မလေးရှား
ယခုနှစ် မတ်လ နောက်ပိုင်းတွင် TikTok သည် အရှေ့တောင်အာရှ နှင့်အနောက် ဥရောပ နိုင်ငံများတွင် တိုက်ရိုက် e-commerce ဝန်ဆောင်မှုများကို လည်း ဖွင့်လှစ် လိမ့်မည်။
Tags *ByteDance | E-Commerce | Indonesia | TikTok | UK
ဘိုက္႐ိုက္က ဂီတကို ဦးစားေပးၿပီး ထုတ္ကုန္ေတြကို ေရွ႕တန္းတင္တဲ့ Soccer Chief Officer
ဘုိက္တီးသည္ မၾကာေသးမီက ၎၏ ဂီတထုတ္ကုန္မ်ားကို ဦးစားေပး၍ P1 သို႔ တိုးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး ဂိမ္းႏွင့္ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ခိုးဆိုးလုဆဲဆဲ တရုတ်ကုန်စည်ဒိုင် သုတ်သင်ခံရ
ဇူလိုင္ ၂ ရက္က တ႐ုတ္ နည္းပညာကုမၸဏီႀကီး ဘိုက္႐ိုက္သည္ Hangzhou WeChinh အမွတ္တံဆိပ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ကုမၸဏီလီမိတက္ (Jung South) တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး တ႐ုတ္၏ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး ကြန္ရက္တစ္ခု ျဖစ္သည့္ မက္မန္းChung ကုမၸဏီသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်တဲ့ ဘိုက်စ်ဟာ နေထိုင်မှုပုံစံသစ်နဲ့ စားသုံးမှုနယ်ပယ်ချဲ့ထွင်ဖို့ ခြေကုပ်ခြေကုပ်ယူခဲ့ပါတယ်။
Industry Jul 06 ဇူလိုင် 7, 2021